KUBATSIRA KUZVAKA NEZVAKAITIKA | FXCC
Kukosha kwekuongororwa mumusika wekufambisa
Kutengesa kwekambani yekambani inouya nenzira mbiri dzakasiyana; technically and fundamental analysis. Hurukuro dzave dzichibva kubva pakuberekwa kwekutengesa sekuti kuongorora kupi kwakanakisisa, kana kuti vatengesi vanofanira kushandisa kusanganiswa kwezvikamu zvose, kuitira kuti vaite mamwe mazano ekutengeserana anonyatsozivikanwa. Izvo zvakajeka zvezvinhu zvose zvekwenyanzvi uye zvinyorwa zvakakosha zvinopikiswawo izvo zvinonzi "yefesa-market market hypothesis", iyo inotaura kuti mitengo yemusika inonyanya kusanzwisisika.
Kunyange nhaurirano dzave dzichienderera kwemakumi emakore sekuti ndeupi maitiro ekutsvakurudza ari nani, imwe nyaya iyo nyanzvi dzose dzekutengesa uye vaongorori vanobvumirana pamusoro apa ndekuti iyo miviri iyo ine zvinhu uye inobatsira iyo inogona kubatsira vatengesi. Vatsoropodzi vanobvumiranawo kuti zvinogona kutora nguva yehupenyu yekuita uye kushandiswa kuva chizivo pane imwe, kana maviri maitiro ekuongorora. Izvo zvakashandiswa kushandiswa kwekambani yekuongorora kwakadzokera kumashure e1700 neDutch vatengesi nevatengesi, apo kuongorora kwechigadziko kunonzi kwakatanga muChina muzana remakore gumi nemasere, kurumbidza nzira yakagadzirwa naHomma Munehisa, kugadzirisa kudiwa kwezvinhu zvinokosha zvakadai somupunga.
Vakawanda vanoongorora tsananguro vachabvisa kutsvaga kwekwenyanzvi, vachiratidza kuti ruzhinji rwezvikwangwani zvekambani hazvikwanise uye hazvibatsire, nokuti zviratidzo "kuzvizadzisa nekuzadza". Vanogona kusava nechokwadi nezvekushandiswa uye kukosha kwezviyeuchidzo zvinowanzoshandiswa zvakadai se: MACD, RSI, stochastics, DMI, PSAR (kurega kwemashure uye kumashure), mabheji eBollinger nezvimwewo. Zvisinei, kune vatengesi vakawanda vanoshandisa maitiro ekugadzira zvirongwa muurongwa hwavo hwokutengesa , ndiani achataura zvakajeka kuti kushandisa zviratidzo, kupinda uye kubuda mabasa avo, chaizvoizvo inoshanda. Kwete nguva dzose, asi maererano nehuwandu hwehutano uye huwandu hwekushanda, ruzivo rwavo rwekugadzira runoshanda zvakanaka zvakakwana kwenguva yakareba kuti vaone kuti vakagadzira chirongwa chekutengeserana chechokwadi uye "urongwa" sezvo vatengesi vanowanzotaurira.
Zvisinei, zvisinganzwisisiki kuti vanenge vose vanoongorora-vatengesi vacharamba vachishandisa maitiro ekugadzirwa kwekwenyanzvi, kunyange pavanilla vanilla, chiratidzo chisina chati. Vangangodaro vachisarudza nzira ipi yemutengo inoratidzira iyo inosarudza: chigadziko chemwenje, Heikin-Ashi, mutsara, mapini-mbariro, nezvimwewo. Kana vachashandisa nzira yakarurama yekutengeserana kusanganisira: yakakwirira yepamusoro, yakadzika kumusoro, inofamba-soro, musoro nemapfudzi 'maitiro, ma-fractals, pivot points, kudzoka kweFibonacci uye kutora mitsetse yakasiyana siyana. Kana imwe yedzimwe nzira iri kuiswa pane chati, chati yacho inogona kutarisa yakabatikana sechati ine zvakawanda zvezvirevo zvinotaurwa. Uye hausi kuverenga sekuti ndekupi kwaunogona kumira uye kutora proft muganhu mirairo zvakare mafomu ekuongorora kwekwenyanzvi?
Nokudaro kunyange vakazvitsaurira tsvakurudzo yekutsvaga vatengesi vachiri kushandisa ruzivo rwekuongorora, ivo vachangosarudza kufunga nezvemashoko, zviitiko uye kubudiswa kwemashoko kuti vaite, kana kuti vataure zvisarudzo zvavo. Uye ivo vacharamba vaine zvinyorwa zvese zvekubudiswa, pamwe nekushandisa Twitter, kana kubhadhara mari yakawedzerwa yekushandisa izvo zvinonzi "squawk", mukuedza kuva pamusoro pemusika nekutengesa kwavo zvisarudzo.
Zvisinei, chikamu chino chesaiti yedu haisi pano kuzokurukura maitiro akaenzana ekugadziriswa kwemashoko uye ekugadzirwa kwezvinhu, tirikudzidzira chikoro cheFX umo tichazoita izvozvo kwenguva yakareba, isu tichatanga kupa mhedziso shomanana dzezvinyorwa zvitsva pakati iyo nzvimbo mbiri dzakasiyana dzekuongorora.
Chii chinonzi Forex Technical Analysis?
Kuongorora kwekombiki (kazhinji kunonzi TA) ndeyekufananidzira kwemazuva emangwana kutengeswa kwenhamba zvichienderana nekuongororwa kwemafambiro akapfuura. Kuongorora kwekambani kunogona kubatsira vatengesi kutarisira izvo zvingangodaro zvingaitika kune zvinodarika nguva. Kuongorora kwekwenyanzvi kunoshandisa zviratidzo zvakasiyana-siyana uye mifananidzo inoratidza kutengesa kwemari pane imwe nguva yakasarudzwa. Nokuongorora tsananguro dzakaunganidzwa kubva kumabasa ekutengeserana, zvakadai sekutengesa mutengo uye volume, vatengesi vane tariro yekuita chisarudzo pamusoro pokuti mutengo ungatora chii.
Zvakawanda zvekuongorora-vhizimisi vanongwarira zvishoma nyaya. Vanotora pfungwa yokuti pakupedzisira tsanangudzo uye zvichida mutambo wekusunungurwa kwemashoko ezvepfumi, pakupedzisira ichazviratidza pachavo pane chati. Zvechokwadi, mutengo pane chati unowanzoita vasati vatengesi vasati vamboona dhesi rakabudiswa, kana kuti vane mukana wekuverenga nyaya uye vozoita chisarudzo chakanaka. Izvi zvinogona kuva sechigumisiro chekushandura kwepamusoro-soro / kukwirira kwevatengesi vari kukwanisa kutungamira nhepfenyuro inhau mumagetsi ekukurumidza vasati vashoma vatengesi vanofa vanogona kuita.
Chii chinonzi Forex Fundamental Analysis?
Vanonyanya kuongorora vatsvakurudzo vanoongorora kukosha kwekutsvaga kwekutsvaga, mune forex izvi zvinoda kuongorora kwakanyanya mamiriro ehupfumi anotora kuongororwa kwemari yenyika. Kune zvinhu zvakawanda zvinokosha zvinokosha izvo zvinotora chikamu mune shanje yemari, mazhinji ayo ari mune izvo zvinonzi "zviratidzo zvehupfumi".
Zviratidzo zvezvehupfumi zvinoshandiswa uye nhoroondo yakabudiswa nehurumende yehurumende, kana sangano rega rega saMarkit, izvo zvinonyanya kuongorora nezvehupfumi hwenyika. Mishumo yezvehupfumi ndiyo nzira iyo hutano hwehupfumi hwenyika hunowanzwisiswa. Yakabudiswa panguva dzakarongwa data inopa misika nemuenzaniso wehupfumi hwenyika; rakakonzerwa here kana kuti rakaramba? Mukutengeserana kweFX, chero kukanganisa kunobva kumapakati, data yakapfuura, kana kubva kune zvakagara zvataurwa, zvinogona kukonzera mutengo mukuru uye kufamba kwemhepo.
Pano pane hurukuro mina huru iyo inogona (pakusunungurwa) yemutengo wemari yemutengo
GDP ndiyo yakawanda kwazvo yehupfumi hwenyika; huwandu hwekutengeswa kwemari yezvinhu zvose uye maitirwo anobudiswa munyika panguva yakarambidzwa. GDP inoratidzika, saka vatengesi vanowanzotarisa pamishumo miviri yakabhadharwa kusati kwave kufanirwa kwePGDP; report rapfuura uye preliminary report. Kuongororwa pakati pemishumo iyi kunogona kukonzera kusagadzikana kukuru.
Zvokutengesa zvekutengesa 'inoshambadza zviyero zvinotambira zvese zvezvitoro zvekutengesa mune imwe nyika. Mharidzo iyi chiratidzo chinobatsira chekutengesa kushandiswa kwevatengi, kugadziriswa kwekusiyana kwemazuva. Inogona kushandiswa kufanotaura kushanda kwezviyeuchidzo zvakakosha zvekugadzirisa uye kuongorora hurumende yepamusoro yehupfumi.
Kuchinja mukugadzirwa kwe: mafekitari, migodi uye zvigadzirwa mukati mehupfumi hwenyika zvinogona kuratidza hutano hwehupfumi. Inotaurawo nezvekugona kwavo; iyo iyo iyo fekitari yega yega kana yekushandiswa kwayo iri kushandiswa. Zvakanaka kuti nyika inofanira kuwedzera kuwedzera kwekugadzirwa kwezvinhu, asi iri pedyo nehuwandu hwayo.
Vatengesi vachishandisa deta iyi vanowanzotarisa kushandiswa kwebasa, izvo zvingave zvisingagadziriswi sezvinodiwa simba, zvinoshandiswa nemamiriro okunze kuchinja. Kukosha kunoshandurwa pakati pemishumo kunokonzerwa nekushanduka kwemamiriro okunze, izvo zvinogona kukonzera kusagadzikana mune mari yenyika.
Iko CPI inotarisa kuchinja kwekutsvaga kwezvinhu mumitengo yezvinhu zvekutengesa kumativi. mazana maviri akasiyana siyana. Uyu mushumo unogona kushandiswa kuona kana nyika ichigadzira kana kurasikirwa nemari pane zvigadzirwa zvayo nemashandiro. Inogonawo kushandiswa kutarisa kana kwete bhanhire guru kana hurumende ichasimudza kana kuderedza huwandu hwekuda kwehuwandu hwekuda, kana hunoita hutonhorera kana kuti kukurudzira hupfumi.